Tag: data geografika | Martech Zone
Tag: data geografika
Data momba ny fitondran-tena nomerika: Ny tsiambaratelo nitazona tsara indrindra hikolokoloana ny tsara namboarina niaraka tamin'i Gen Z
Sabotsy, Desambra 19, 2020 Sabotsy, Desambra 19, 2020 Lisa Speck
Ny paikady ara-barotra mahomby indrindra dia entin'ny fahatakarana lalina ny olona izay noheverina ho tratrarina. Ary, ny fiheverana ny taona dia iray amin'ireo mpilaza mialoha indrindra ny fahasamihafana eo amin'ny fihetsika sy ny fitondran-tena, ny mijery amin'ny alàlan'ny masom-pirazanana dia fomba iray nilaina maharitra ho an'ireo mpivarotra hamindra fo amin'ireo mpihaino azy. Androany, ireo mpanapa-kevitra miankina amin'ny orinasa mandroso dia mifantoka amin'ny Gen Z, teraka taorian'ny 1996, ary ara-dalàna izany. Hiavaka ity taranaka ity
Alteryx: Fitsikilovana momba ny asa aman-draharaha sy Analytics stratejika
Alakamisy, Jona 14, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Rehefa miresaka momba ny analytics ny olona dia mazàna voafetra amin'ny tranokala, data mahazatra izay mahazatra amin'ny mpivarotra maro. Ho an'ireo fikambanana lehibe misy angona terabytes - ao anatin'izany ny angon-drakitry ny fividianana mpanjifa, angon-drakitra fanisam-bahoaka, angona jeografika, angona media sosialy, sns. Ity misy resadresaka lehibe iray nifanaovan'i Alteryx sy i Boris Evelson an'i Forrester momba ity lohahevitra ity: Alteryx dia manambatra ny faharanitan-tsaina sy ny fahaizana mifandray amin'ireo datamart lehibe ho lasa inona.